News-Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Kalluumeysiga, fuulitaanka, iyo barafka ayaa dhammaantood ah isboorti bannaanka ah oo aan jecel nahay. Waxaan kugula talinayaa 2 xirmooyin tixraac ah. Saaxiibada hiwaayadda leh way ila xiriiri karaan!
Yaa og waxa barafku yahay?
Nolol maalmeedka, keenista qadadaada ayaa ah xaalad qof walba la kulmi doono. Marka xigta, waxaan kugula talinayaa 2 xirmo oo baraf ah qof walba.
Waxaa jira waxyaabo dhalaalaya oo dhalaalaya oo ubadkaaga la qaadanaya. Waqtigaan, boorsada hooyada oo hanan karta waxyaabo yaryar oo kala duwan sida dhalooyinka dhallaanka, xafaayadaha, tuwaalada candhuufta, iyo unugyada qoyan ayaa xitaa aad looga maarmi karaa.
Boorsooyinka maqaarka ee dhifka ah sida maqaarka yaxaaska, maqaarka gorayada, maqaarka qorraxda, iwm. Waxay u baahan yihiin in dusha sare lagu nadiifiyo tuwaal qallalan, ka dibna si khafiif ah loo mariyo lakab maqaar dhalaalaya si kor loogu qaado iftiinka dusha maqaarka.
Aqoonta gadashada qalabka: afar tabaha lagu doorto boorsada dhabarka ee banaanka
Saaxiibbo badan oo safarka ah ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay safka ku biireen maxaa yeelay waxay arkeen qof sita shandad weyn. Ka dib markaan si tartiib ah u jeclaaday banaanka, waxaan ogaaday in boorso ay ka mid tahay qalabka ugu muhiimsan ee loogu talagalay isboortiga banaanka. Boorsada d......